အခမဲ့သည်ငါ့အဘို့ Flash ကိုသတိပေးချက်များ | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ငါ့အဘို့ Flash ကိုသတိပေးရန်
ငါ့ကို APK ကိုများအတွက် Flash ကိုသတိပေးရန်
ငါ့အဘို့ Flash ကိုသတိပေးရန်
အရေးပါသောဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်မက်ဆေ့ခ်ျကိုအဘို့စောင့်ဆိုင်းနေပေမယ့်သင့်ရဲ့ device ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အချိန်မဆိုရသလော ငါ့အဘို့ Flash ကိုသတိပေးသည်သင်တို့အဘို့ဤအကိုင်တွယ်ကြပါစို့ ဒါကစမတ်, သေးလွယ်ကူသော-to-အသုံးပြုမှု application ကိုသင့်ရဲ့ device ကိုမှတစ်စုံတစ်ယောက်သင်ရောက်ရှိဖို့ကြိုးစားနေရဲ့အခါတိုင်းတစ်ဦး blinking flash ကိုပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။
အစည်းအဝေးထဲမှာချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားသို့မဟုတ်သင့်ကလေးအိပ်ပျော်ပါသလဲ သင်တစ်ဦးအသံတိတ် mode မှာသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုထားပါဘူး, ဒါပေမယ့်အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုခုကိုလက်လွတ်ချင်ကြသည်မဟုတ်လော ! app ကိုနှင့်အတူ, သင်အမြဲမည်သူမဆိုနှောင့်ယှက်ခြင်းမရှိဘဲဖုန်းခေါ်ဆိုမှုသို့မဟုတ်မက်ဆေ့ခ်ျကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်ဒီနေရာတွင်ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုင်: သင်သည်မည်သည့် app ကိုတစ်ဦးထံမှအဝင်ခေါ်ဆိုမှု, SMS ကိုသို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းကြားစာကိုလက်ခံရရှိတခါ, သင့်ဖုန်းပေါ်ရှိ flash ကို device ကိုအသံတိတ်ထားသောပင်အခါ, blinking စတင်သည် ၎ app ကို default အအကြောင်းကြားစာ settings ကိုနှင့်တကွကြွလာပေမယ့်သင်အမြဲသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့သူတို့ကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်သည်
- အဝင်ခေါ်ဆိုမှုများအတွက် flash ကိုအကြောင်းကြားစာများ Enable နှင့်ခေါ်ဆိုခအပေါ်တစ်ဦး flash ကိုတစ်စုံတစ်ယောက်ကသင်ရောက်ရှိဖို့ကြိုးစားနေရဲ့အခါတိုင်းရ။
- သူတို့ကသင့်ရဲ့ device ကိုမှလာအဖြစ်ဝင်လာသော SMS အတွက် flash ကိုသတိပေးချက် Activate အပေါင်းတို့နှင့်အစည်းအဝေးသို့မဟုတ်ပါတီအသေးစိတ်ကိုဖတ်ပါ။
Messengers, ရာသီဥတု apps များ, လူမှုကွန်ယက်များနှင့်အများကြီးပို flash ကိုသတိပေးချက်ဟာအမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီကိုနှင့်အတူသုံးနိုငျ: - သင်ကနေ flash ပါအသိပေးချက်များကိုလက်ခံရရှိရန်ချင်တဲ့ apps များကိုရွေးချယ်ပါ!
- ဒါဟာတစ်နေ့တာရဲ့အဆုံးမှာဖျန်ကနေဘက်ထရီကိုကယ်တင်မယ့်ဘက်ထရီကို-saving mode တပ်ဆင်ထားသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီ app အတူသင့်ရဲ့ Android တစ်ခုသာပွတ်ဆွဲကွာပင်ညဥ့်အချိန်တွင်ဂြိုလ်သားအချက်ပြဘို့အတောက်ပနှင့်လုံလောက်အောင်အစွမ်းထက်အရေးပေါ်နှင့် strobing mode ကိုအတူပြီးပြည့်စုံသောလက်နှိပ်ဓာတ်မီး, ဖြစ်ခြင်းကနေပါ!
6.06 ကို MB